Maxamed Cali Yuusuf :: Dr Gaagaab
Hadalkii Wasiirka Maaliyada Puntland uu kaga Warbixinayey Heshiiskii Puntland iyo Shirkada uu ku Sheegay Australian oo Cod iyo Qoraal ah::::
SomaliTalk.com | Sept 10, 2005: Wasiirka Maaliyada DGPL Maxamed Cali Yuusuf (Dr. Gaagaab) oo maanta magaalada Boosaaso kula hadlay Isimada, waxgaradka iyo saxaafada ayaa sheegay in heshiiska lala galay shirkada lagu magacaabay "Consort" in uu socon doono muddo toban sano ah oo ay shirkadaas kula galeen in ay baarto macdanta iyo shiidaalka, taas oo uu raaciyey in marka hore ay shirkadu baari doonto macdanaha ay ka mid yihii Tiinka, Dhuxul Dhagaxda, Birta iwm, laakiin shiidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ay noqon doonaan waxyaabaha ugu dambeeya ee la baari doono. Shirkadaasina ay degi doonto Boosaaso oo ay u baahan tahay 3 km, maadaama ay keensanayan DIGAAG ay qab ka siin doonaan reer Puntland, waa sida wasiirku hadalka u dhigaye. Dhegeyso Hadalkii Wasiirka.
Wasiirka Maaliyada DGPL Maxamed Cali Yuusuf (Dr. Gaagaab) arimaha uu maanta qiray waxaa kamid ah:::
Waxa uu qiray In arrinta shirkada uu sheegay in ay tahay Australian aan golaha wasiirada DGPL isku raacsanayn sida loo maareeyey, waxana uu si toos ah u weeraray qaar kamid ah wasiirada DGPL oo uu ku tilmaamay inay dano gaar ah wateen. Arrintaas oo sababi karta in wasiiradaasina ay soo bandhigaan waxyaabaha ay ka og yihiin shirkadaas...
Waxa uu qiray in Puntland ay diyaar u tahay in ay dhulka Puntland ka iibiso cid kasta oo u timaada oo sida uu sheegay 'barwaaqo ka dhigeysa' isagoo aan wax shuruud ah ku xirin - waana arrinta hadda taagan.
Waxa uu qiray khilaafkii DGPL iyo DFKMG mar hore kusoo kala dhex galay arrimaha shirkadaha saliida baara, waxase uu ku adkaystay in sharcigu dhankiisa yahay oo arrinta ay Puntland ku gar leedahay, in kasta oo madaxweynaha Soomaaliya uu caddeeyey in arrintan Puntland looga gar leeyahay.
Waxa uu qiray in shirkadani ay tahay shirkad aan wax dakhli ah lahayn maadaama ay rabto in ay reer Puntland ka iibiso digaag oo lacagta Digaaga ka soobaxda ay hawlaheeda ku maaraysato. Waana sababta ay ugu baahan tahay in ay degto magaalada ugu dadka badan Puntland xilliga dayrta (Oktober wixii ka dambeeya waa dayr laga soo laabtay xagaa baxii)
Waxa uu qiray in aysan jirin heshiis qoraal rasmi ah oo lagula xisaabtami karo shirkadaas mark aarrintu ay noqotolacagta, maadaama uu yiri lacagta ay bixinayaan kuma qorna heshiiska ee waa "xeer hoosaad". Sido o kale waxa uu qiray in su'aal kasta la weydiin karo marka laga reebo lacagta.
Waxyaabaha uusan wasiirku cadaynta ka bixin ee ah su'aalaha u yaal in uu ka jwaabo waxaa kamid ah:::
Waa maxay qorshaha ay dawladu u degjisey maaraynta kharashka $25 million iyo $50 million ee labada sano ee ugu horeeya - haddiiba la iska ilaawo $200,000 ee bil kasta ay shirkadu bixineyso oo ay muuqato in ciidan shirkada Ilaaliya loogu qoondeeyey...
Macdanta Gobolka Bari meesha ay ku jirto waa la yaqaan, waxaana ugu horeeya MAJAYAHAN iyo DHALAN oo Koonfur kaga aadan Boosaaso iyo Ceelaayo. Haddaba maxaa shirkadda "Camp"-keeda ee laga dhisayo Boosaaso looga dhigi waayey meelaha macdanta TIINKA lagu hubo, oo shirkadii BULGARIA kasoo saari jirtey sanadihii siddeetamaadkii, waa Majayahan/Dhalan - Waxaana la xusuustaa markii la eryey shirkadii Bulgaria maadaama ay xiriir la lahayd Ruushka oo Soomaalidu eridey maadaama uu racay Itoobiya (dagaalki Somali/Itoobiya) in xilligaas Boosaaso laga dhoofiyey ugu yaraan dooni buuxda oo ah Macdanta Tiinka oo ah macdantii ay soo saareen Bulgaariyintu laakiin ayadoo aaa la suuq geyn la cayriyey.? Shirkadii Bulgaria ee ka macdanta ka qodi jirtay Majeyahan / dhalan waxaa magaceeda la oran jirey Geomin. (Waxaa xusid mudan in Bishii October 2002 ay dalka Bulgaria ku kulmeen daljiraha Soomaaliya u fadhiyey Liibiya, Dr. Maxamed Xuseen Maxamed "Ilkadahab" iyo madaxweynaha Bulgaria, Georgi Parvanov, oo kaddib markii uu daljiruhu u gudbiyey warqad uu ka sidey madaxweynihii Dawladii Kumeel gaarka ahayd ee Carta lagu soo dhisay, Dr. Cabdulqaasim Salaad Xasan, in markaas lays la sooqaadey in shirkaddii Geomin ee ka shaqayn jirtey mashruucii Majeyahan iyo Dhalan ee baarista macdanta dib loo soo celiyo, lagana dhiso halkaas wershed samaysa crystals-ka(qaruuradaha)... [ISHA: SomaliTalk.com | 2002].
Inta aan shirkadu Boosaaso iman ka hor October qorshaha shirkada ma loo bandhigi doonaa golaha baarlamaanka DGPL si ay uga doodaan?
Arrinta ugu weyn oo ah: shatiga shirkada iyo meesha ay ka diiwaan gashan tahay masoo bandhigi doonaa si dadweynuhu u arkaan miisaaniyada shirkada, aariikhdeeda, caymiskeeda, iyo xarunteeda rasmiga ah, waayo sida xog lagu hayo shirkadani waxay sheegataa in ay ka diiwaan gashan tahay jasiiradaha Madavis oo ah meel aan xerka Australia shaqo ku lahayn. Taas oo muhiim ah in shacabka ay u cadaysayso dawladoodu.
Dhegeyso: Hadalkii Wasiirka Maaliyadda DGPL oo Cod ah.. Dhegeyso... GUJI
(Cududaar: Waxaan dhegeystayaasha uga cududaareynaa in codka tayadiisu aysan wanaagsananayn, waxaanse hoos ka heli doonta hadalkii wasiirka oo qoraal ah..)
Wasiirka Maaliyadda DGPL Maxamed Cali Yuusuf (Dr. Gaagaab): Shirkada Waxaan kula heshiiney sannadka hore $25 million in ay bixiyaan, ama mushahar ha u bixiyeen ama guri ha galeen. Sannadka xigana $50 million in ay bixiyaan. Inkasta oo aan taasi heshiiska lagu qorin, laakiin wadahadala gaarka noo ah ayaa hadaladaasi ku yaaliin.
Hadalkii Wasiirka Maaliyadda DGPL oo Qoraal ah::::
Charter = Marka uu yiraahdo waxa uu ka wadaa DASTUUR.
Prime Minister = Waxa uu ka wadaa RA'IISUL WASAARE.
Airport =Garoonka diyaradaha
Camp = Xero xaydaaman oo kumeel gaar ah
Guarantee = Dammano Qaadid (ballan qaad)
Maxamed Cali Yuusuf "Dr. Gaagaab" waxa uu hadal kiisii ku bilaabay sidan:
Isimada, Odayaasha, Madaxda iyo waxgaradka meeshaan isugu yimid, Asalaamu caleykum waraxmatu laahi wa barakaatuhu. Raali ayaad iga ahaaneysaan, meeshu waa kulushahay, wax badan oo aan rabey in aan sheego in aan soo gaabiyo ayaan ku khasbanahay, maadama meeshaan ay cilimiladu kulushahay, markaa nuxurka wixii ah ayaan u gudbaayaa.
Odayaal waxaan rabaa laba arrimood oo waayahan laga hadlaayey in aan mid walba wax yar ka iraahdo.
Midda koowaad: idinka oo ka war qaba oo aan filaayo in aad warar badan ka haysaan, ama ha is-khilaafsanaadeen ama warar isku mid ah ha ahaadeene, ayaan ka hadlaayaa. Muddo hadda ah dhawr bilood, afar /shan bilood, waxaa madaxda Dawlad goboleedka Puntland ka shaqayneysey arrimo ku saabsan in aan ogaano dhulka aan degganahay ee Ilaahay inagu beeray waxyaalaha laga sheego ee la yiraahdo waxbaa yaala iyo waxbaa ku jira in wax laga ogaado, haddii wax laga helona lagu noolaado oo dhibaatooyinka dhaqaale lagaga baxo. Waxaa wada hadal lala galay shirkad Australian ah oo Australia ka timid, oo ku hawlan ama hawlaheeda ay ka mid yihiin baarista Macaadinta. Shirkadaas waxaa la yiraahdaa Consort.
Heshiiskii u horeeyey ama wada hadalkii u horeeyey ee lala galay waxaad la socotaan Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland (Maxamuud Muuse Xirsi "Gen. Cadde Muuse") iyo Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah (Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud "Dr. Faroole") in ay Nairobi la tageen shirkada madaxdeedii oo ay ula tageen Dawladda Federaalka ah madaxdeeda. Halkaas oo xoogaa la isku af garan waayey. Mas'uuliyiinta Dawlada Federaalka ahna ay ku cudurdaarteen in ay yirahdaan sharcigii ilaa aanu samayno, sharcigii macdanta, lama geli karo heshiis, ma ogolaneyno anagu hawshaas, waxbana hadda ka qaban kari mayno. Sharcigii Dawladii hore waa jiraa oo sidiisii ayuu u jiraa, mar haddaan sharci kale jirina waxa weeyaan kii hore in lagu dhaqmo weeye, sharciga caalamiga ah iyo adduunkuna sidaas ayuu qabaa.
Arrintii halkaas iyadoo mareysa waa tii Nairobi laga soo noqday, kabacdi wax baan baarbaaray, sharciyaal baan baarbaaray, Kan dawladda Federaalka u qoran laftigiisa ayaanu raadsaney, oo anigu aan wax ka qoray, aniga laftayda ayaa wax ka qoray, qiil baan raadiney Dawlada Federaalka in ay xaq u leedahay ama gar u leedahay in ay is hor taagto wax ummad loo qabanaayo - Xeerkaas iyo sharcigaas waa la waayey. Waxaa kaleeto oo la waayey waqtigan isaga ah dawlada Federaalka oo aan dalkii oo aysan awood kulahay in ay awood u isticmaasho in aan wax la qaban karin. Xeerka qoran oo charter-ka la yiraahdo ee Dawlada Federaalka u qoran waxaa weeye: Dawlad Goboleed-yadu waxay u madax bannaan yihiin hawla hooda iyo xiriiradooda inta Dalwada Federaalka la dhamaystiraayo. Hadda wax laga qabtay oo ka socda arrimihii Federaalka ma jiraan. Sharciyaal ma jiraan. Dawlada Federaalka waxay ku mashquul san tahay abaabulkeedii iyo degitaankeesii. Marka awood ay dalka ku leedahay oo ay dalkii ku wada xakunto weli lama gaarin. Walow aan u hoggansanahay oo oggolahay, tiir asaasi ahna aan ka nahay, welina xiriirkanagu fiican yahay.
Arimahaas iyaga ah iyo arrimo kale oo caalami ah ayaa waxay nagu dhiiri geliyeen in aan shirkadii wada hadal la galo. Shirkadii ayaan khabaar u dirsanay. Bishii Agoosto 28keedii ayaan halkan aniga iyo madaxweynaha ka baxnay. Wasiirkii Qorshaynta & Xiriirka caalamiga ahna Australia ayuu tegey. Nimankii ayaan wada hadal la galay, nasiib darro wasiirku waa naga maqnaa, wasiirka Qorshaynta & Xiriirka Caalamiga ah. Mudadii la dhamaystiri lahaa baa nagu yar baa nalaku yiri. Kaddib muddo yar kadib waa laga soo kacay (Dubai).
Shirkadii iyo anaga wada hadalada ayaa na dhex maray, iyaguna abuukaatayaal bey qabsadeen - oo iyaguna waxbey doonayaan anaguna wax ayaan dooneynaa - anaguna abuukaatayaal ayan qabsanay - labo abuukaate ayaanu qabsanay, qolo walba waxa ka suurta gal ah iyo waxa sharci ahaan uu caalamku ka qabo. Waxa nala weydiiyey sharciyada, sharciga caalamiga ah, meelkasta markii la baaray waxaa la waayey wax naga xayiraaya in aan dhulkayaga wixii maslaxadi noogu jirto in aan ka shaqayno. Shirkada markii hore waxaa la yiri dawlad goboleedku awood ma leh in ay heshiis saxiixaan anagoo arrintii isku hayna buuq ayaa dhacay, waad maqasheen in Dawladii Federaalka uu Prime Minister-kii hadlay, arimahaas markaas xoogaa shaki ah ayaa dhacay, hase ahaatee shakigii waxaa looga baxay markii anaguna aan warqadda qornay oo bayaanka soo deyney oo hadana abuukataayaashii la sii wado.
Anigu qof ahaan ayaan Prime Minister-ka iyo madaxweynaha la hadlay, waan eedeeyey oo waxana iri waxaa la idinka sugayey in aad dadka wax u qabataan, laakiin ma ahan in aad is hor taagtaan wixii wax laga gaarayo, aniga iyo Prime Minister-ku waa is qabsanay ....... Telefoon....... Aakhirkii waxaan ku heshiiney... anagu waxaan niri waxba la carari meyno wixii la helo ummada Soomaaliyeed ayaa leh. Haddii wax laga gaari waayona hadde isku day ayaanu samaynay. Halkaas ayey hadda noo joogtaa. Laakiin sharci ahaan waxaan idiin sheegayaa in heshiiskaas awoodeena ay ku jirto xagga dastuurkeena, xagga charter-ka qaranka, iwm. Waxaa charter-ku sheegayaa wixii la mid ah macdanta iyo waxa dhulka ku jira waa hanti qaran. Sharciga marka la baaro Hanti qaran anagu waxbaan ku leenahay, mase maya. Qayb kamid ah qaranka ma nahay mase maya. Maxaa noo diidaya marka haddaan qayb kamid ah nahay. Waxyaalaha sharciga ah ee aanu ku doodnay ayey ka mid tahay. War anagu qaranka qayb ayaanu ka nahay. Awood haddii aan u leenahay in aan wax ka qabano wixii qaranku leeyahay haddee xaq ayaan u leenahay, sharci ayaan u leenahay.
Arrimahaas oo dhami waa waxyaalihii la isla soo maray. Ugu dambayntii shirkadii heshiis ayaan la galay. Haddee heshiiskii aan la galay kulligiis ma soo wada koobi karo. Muhiimadiisu waxa weeyaan muddo toban (10) sano ah in ay dhulkeena ka shaqeeyaan. Afarta (4) sano ee hore waa wax baarid. Waxaa la sheegayo ee la leeyahay dhulka waxbaa ku jira, macdan baa ku jirta, birbaa ku jirta, batrool baa ku jira, gaas baa ku jira, waxaasaa dadku sheegaan, marka bal afartaa sano in la baaro weeye, haddii wax la helona haddee khayr weeye, haddii dhulkeena wax la waayona haddee isku day ayeynu samaynay. Afartaas sano faa'iido badan ayeynu heli doonaa. Marka ama waxaan noqoneynaa dad barwaaqo dhex fadhiya ama sideenii ayaan ku abaadeynaa oo afartaas sano kadib haddii wax la waayo shirkadaas waa eryenaa oo naga taga ayaan leenahay, haddii wax la waayo. Cid dambena inoo sheegi meyso ceelal baa buuxa, waxaana ka bixi doonaa gaasbaa ku jira oo batrool ayaa ku jira, haddii wax la helona Ahlan wa sahlan, haddee barwaaqaan higsaneynaa in aan ku jiri doono xaqna waa u leenahay. Siddeed sano /sagaal sano ayey dawlad goboleedku dhisnay mushaharkii wasaarada maaliyada ayaa lagu soo wadey, marka isku day ayeynu samayneynaa.
Shirkaddu hadey hadda timaado ugu yaraan 400 ama 500 oo qof ayaa shaqo ka heli doonta ama wax hala helo kabacdi ama wax ha la waayo. Intaas oo guri ayaa la kala iibsanayaa, Airport-ka ayey wax ka qabayanaa, dekedda ayey wax ka qabanayaan, si qalab iyo alaabooyin looga soo dejiyo.
Digaaga iyo Macdanta/Shidaalka Puntland:::
Shirkada shuruudaha aan ku xirnay waxaa ka mid ah Octoobar haddii la gaaro in ay shaqada soo bilaabaan. Aniga hadda qaar ayaa ila socdey. Waxay ilaa shalay iyo maanta ay sahaminayaan ama radinayaan meeshii ay ka bilaabi lahayeen oo Camp-ka ka dhisi lahaayeen, oo Boosaaso ah, gobolada kale weli ma gaarin. Muddo 6 bilood gudhood waxay ku mashquul sanaanayaan sidii ay ku degi lahaayeen Bari iyo Nugaal. Dhulka ay u baahdeen waa ilaa 3 km oo Boosaaso looga baahan yahay. Dhulkaas IIB ma aha, anagaa siineynaa, waayo wax ka weyn baanu ka rabnaa. Waxay ka dhisanayaan guryo, Camp ayay ka dhiganayaan, beer ay cunto kala soo baxaan ayey ka samaysanayaan, digaag ayey samaynayaan oo magaaladu ka faa'iidaysato oo ay iyagu ku nooladaan, iyagaa waxooda wata, wixii hilib digaag ah, hililka kale waa helayaan oo arigaas ayey cunaayaan, laakiin digaag iney keenaan oo magaalada wax ka siiyaan ayaa ku jirta. Sidaas darteed ayey dhulka u rabaan.
Heshiiska shirkada waxaa ku jira, waxaanu ku niri war dawlad fakhri ah ayaan nahay, mushaharka ma ahane wax kale oo dhulkaya soo galaha - waxa lagu nool yahay mushaharkaas iyo wax yaalaha ay ganacsadu keensato oo aan ganacsadada Puntland ugu mahadineyno oo wax ay dawladu qaado ay ka yimadaan ganacsadata, haddii aan ganacsadu xoog saarin wax soo saarka wax badan lama heleen. Waxa kale oo jira mudada afarta sano oo hore in ay dawlada kabaan, oo ay miisaaniyada kabaan, oo mushaharka kabaan. Waxaana kula heshiiney - waxba idinka qarin maayee - bil walba in ay baxshaan laba boqol oo kun oo doolar ($200,000) oo aysan ku jirinin lacagta ay dhulka gelinayaan afarta sano ee hore. Waxaan kula heshiiney sannadka hore $25 million in ay bixiyaan, ama mushahar ha u bixiyeen ama guri ha galeen. Sannadka xigana $50 million in ay bixiyaan. Inkasta oo aan taasi heshiiska lagu qorin, laakiin wadahadala gaarka noo ah ayaa hadaladaasi ku yaaliin.
Anagu dacaayad kasta hala faafiyo, warar hala faafiyo, waxay ila tahay maanta waal aga dheregsan yahay, internet-yada wax kasta halaga buuxiyo, Gaagaab iyo Cadde ayaa dhulkii gateen. War yaa naga gadanaaya. Cidii barwaaqo ka dhigeysa oo naga gadaneysa diyaar ayaan la nahay, yaa naga gadanaaya. Qoryihii waa naga yaradeen, dadkii magaalooyin ayey soo degeen, waxay cunaan iyo waxay qaataan ayey doonayaan, ciddii naga gadaneysa qiimahaas ayaan ka wada gadeynaa, dhulka laga soo bilaabo Garacad ilaa buuraha Sool oo aanaan waxba ku qabsan, marka yaaba naga gadanaaya.
Allah ha u naxariistee Al-Nahyaan (Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan - madaxweynihii Imaaradka Carabta ee geeriyoodey November 2, 2004) markii uu heshiiskii la gelayay (shiidaalka) wuxuu kula heshiisy boqolkiiba shan in lasiiyo, carab oo dhan ayaa kacday, waa warey ayey yiraahdeen carbtii kale, hesiiskaas waxaa ku jirtey in sanad kasta haddii wax lasoo saaro ay isaga wax u siyaadaan, hadda isaga ayaa boqolkiiba shan bixiya , waa meeshii uu 40 sano ka hor kabilaabay.
Marka odayaal heshiis aan shirkadaas la soo galnay sidaas weeye, waa soo koobayaaye. Shirkadu waa imaneysaa, Octoobar ayey shaqo bilaabayaan, hadda waxaa ila socdey niman abuukatayaal ah oo waa joogan, sharci yaqaan ayaan ahay. Dhulkiina dad inaga ah oo reer magaalka ah ayaa ballan qaaday inay dhulkii bixiyaan.
(Shirkadu) waxay na yirahdeen "Guarantee" ma nasiinayesaan 10ka sano ama afarta sano in aan xabad nalaku soo ridin. Anagu dhaqan baan leenahay, odayaal baan leenahay, isamaan leenahay. Waxaana isku xiran nabad gelyadooda shirkada iyo $200,000 oo kun - anaguna in aan nabad gelyadooda sugno iyaguna ay bixiyaan lacagtaas.
Shirakadaas anagu dan gaar ah kama lahayn, been idiin sheegi meyno, lacag kama qaadan, hoteelkii aan deganayn iyaga ayaa kharashkiisa bixiyey, laakiin shilin kale nagama soo gelin. xataa anagu baabuur aan magaalada ku aadno oo madaxweynihii oo daahan aan ku geyno (ayaan haysan). In aan dhulkiina gelino ayaan rabnaa oo la baaro. Waxyaalaha la baarayo wax kasta waa ku jiraan. Waxaa laga yaabaa shidaalka noocyadiisa kala duwan, gaaska iyo wixii la mid ah in ay ku dambeeyaan baarirta, laakiin waxa ka horeeya (oo marka hore l abaarayaa) waxaa weeye macaadiinta kale oo ay dhul-dhagaxdu ka mid tahay, bir iyo Tiin iyo wixii noocaas ah, kuwaas ayaa marka hore horreeya oo la baarayaa.
Odayaasha waxaan u soo jeedinayaa in shirkadaas gacan la siiyo, nabad gelyona la siiyo. Shaqaalahana sharci shaqaale ayaa la soosaarayaa oo shaqaalaha xuquuqdiisa ilaalineysa. Waxaana la samaynayaa shuruudo oo qofkii reer Puntland uu yimaado.
Waa kaas heshiiskii aan soo galnay, arintaas iyada ah sidaas ayaan idiinla socodsiinayaa. Waxaanu aaminsanahay anagoo idinka wakiil ahayn sidaas. Qofkii dangaar ah doonaaya iyo waxyaalo badan oo raga iyagu hawsha loo dirsaday oo inaan soo kala xanaaqno ayaa iska jira. Waxaana jira dano gaar ah oo runtii anaga naga horeeyey kabacdi ayaanu helnay, waxyaalo gaalada lagula hadlay oo dano gaar ah oo anaga naga horeeyey ayaa jira. Laakiin in aan niraahno waxaas iyo waxaas anagu Ilahayo ayaanka hoos galay.
Arinta shirkadu sidaas weeye, inaan ka faa'iideysaneyno labada goorba, haddii wax la helo iyo haddii wax la waayoba. Haddii wax la waayo wax Allaale iyo wax ay keeneen inagaa leh. Wax Allaale iyo wax ay keenaan Afartaas sano - haddii wax la waayo inagaa leh. Haddii ay khalad galaan wixii boosaaso yaal, Camp-ka Boosaaso iyo kuwa kale inagaa iska leh.
Arin kale ayaan ka hadlayaa oo ah in ay magaalada gashay in niman ganacsato ah ay samaysanayaan lacag, oo la yiri ganacsato lacag samaysaneysa. Lacagta dawlada ayaa samayneysa. Lacag xadidan oo lacagteena dhammaatay lagu kabaayo weeye. Lacag dawladu gacanta kuhayneyso weeye. Nimanka ganacsadata ah waa run wax bey ku leeyihiin oo qalabka iyagaa keenay, waa niman reer Puntland ah oo ganacsato ah, wax yar ayey ku yeelanayaan, waxooda dawlada ayaa gacanta ku hayneysa. Bangiga ayeyna ku xeraysnaaneysaa, wax dhibaato inoo keenayana ma aha. Haddii waqtigeedu dhammaado lacagtaasna meesha lagu gadanayo iyo qalabkaba dawlada ayaa gacanta ku hayneysa.
Qodob kale ayaan weheliya oo aan rabey inaan idiin sheego, inaga dadkeena hadal bey ku hartay, waxaa ugu sii daran dadka siyaasiyiinta oo anigu aan ka mid ahay, waxa dhibaato dalka been lag afaafiyo meelahaas ayey ka yimaadaan... Inta badan xukuumada dhexdeeda ayaa wax ka yimaadaan, inta badan nin raba in uu wax gaaro ama in meesha uu joogo meel ka fiican gaaro ama wasaaraduha ninbaa jecel. Maalmo dhoweyd waxaa dalka la soo geliyey dastuurka hala bedelo, madaxweyne ha la doorto - qofku waa dhiman kara waa tegi karaa, waa wada fadhinaa - Dastuurka hala bedelo waayo haddii madaxweynuhu meesha ka baxo madaxweyne ku xigeenka ayaa madaxweyne ah. Laakiin madaxweynihii baa jooga'e maxaa waxyaalahaas loo abuuraayaa - qofku waa jirankaraa, jirooyin yaryar ayaa lagu sheegay. Saaxiibadayda wasiirada ah ee hadda tartanka doonaya sharci darro ayey ku doonayaan.....
Aad iyo aad ayaad u mahasan tihiin, wixii su'aalo jira mar kale ayaan ka dhigan doona, hadda qoraxya ayaa kulul, aniga meel kasta ayaa la iga helayaa, wixii su'aalo waa la isoo weydiin karaa, Wixii aan lacag ahayn oo dhan waa la i weydiin karaar, wixii aan lacag ahayn.... waadna mahadsantihiin... Ayuu hadalkii kusoo gabagabeeyey wasiirka Maaliyada ee DGPL.
Maxamed Cabdi Xaaji Mire "Khadar" (bidix), Dr. Yuusuf Maxamed Wacays (dhexda), Beeldaaje Cali Faarax (Midig)
Sawirka: SomaliTalk file..
Kulankii maanta (Sept 10) uu ka hadlay Dr. Gaagaab ee lagu qabtay Boosaaso waxaa goob joog ka ahaa Beeldaaje Cali Faarax oo ammanay maamul goboleedka Puntland. Waxa kale oo kulanka joogey duqa Degmada Boosaaso, Maxamed Cabdi Xaaji Mire (Khadar) iyo Guddoomiyaha gobolka Bari, Dr. Yuusuf Maxamed Wacays "Dhado".
Wasiirka Maaliyadu ma soo bandhigin qorshaha DGPL ee ku aadan "hantida" uu sheegay in ay ka soo geli doonto "shirkadaas". (Waxaa xusid mudan in shirkadda hadda uu wasiirku ka hadlayo ay dalka kusoo gashay magac hay'ad samofal ah oo kaalmaysa carruurta ka hor intii uusan Terry bilaabin safarada uu la gelayo DGPL - Arrinta carruurta Puntland haddii in yar laga xuso: waxay ahayd August 31, 2005 markii ay hay'ada qaramada midoobey ee UNICEF ay soo saartay warbixin orareysa in ay diiwaan gelin ka sameeyeen magalooyinka Boossaaso, Qardho, Garoowe, Galkacyo, Xaafun iyo Dangorayo, kuwaas oo ardayda laga diiwan geliyey ay tiradoodu yihiin 57,000 oo aan wax iskuul ah dhigan oo da'doodu u dhexeyso 6-14 -jir oo ah carruurtii dhalatay kaddib dagaalkii sokeeye ee bilowday 1991. (53.5% wiilal iyo 43.5% gabdho). Waxaa hay'addu qiyaastay in ugu yaraan 450 meelood oo laga degan yahay Puntland in carruurta aan iskuulka dhigan ay tahay inta u dhexaysa 150,000 ilaa 200,000).
Dhegeyso: Hadalkii Wasiirka Maaliyad DGPL oo Cod ah.. Dhegeyso... GUJI
"Waxaan Eedayn usoo jeedinayaa Golaha Baarlamaanka Puntland oo runtii aan oran karo howshoodii loo idmay way dayaceen" Saciid Samatar
Aragtida dadweynaha waxa lagu soo hagaajin karaa:: http://www.somalitalk.com/feedback/
Wararkii subaxnimadii Sept 10 laga qoray hadalka wasiirka Maaliyada DGPL ka akhri halkan...
TAARIIKH KOOBAN EE SOOMAALIYA.....